Zvii Zvandinofanira Kuziva nezvemaVideo Game? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kachin Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Mibvunzo nezvemavideo game
MuUnited States bhizimisi remavideo game rinounza mabhiriyoni emadhora. Munyika iyi . . .
Izera ripi rinonyanya kutamba mavideo game?
Ndevapi vanonyanya kuatamba?
Pavanhu 100 voga voga 55 varume; 45 vakadzi
Pavanhu 100 voga voga 15 varume; 85 vakadzi
Izera ripi rine vakawanda vanotamba?
Vakadzi vane makore 18 zvichikwira
Varume vane makore 17 zvichidzika
Mhinduro (dzatorwa patsvakurudzo yakaitwa muna 2013):
Nhamba idzi dzinongokuudza nezvezera uye nezvevanhu vanotamba mavideo game asi hadziratidzi zvazvakanakira kana kuti zvazvakaipira kuatamba.
Pane zviri kutaurwa pasi apa nezvemavideo game, unobvumirana nezvipi?
“Kuatamba kunonakidza uye kunoita kuti uwirirane nevomumhuri uye neshamwari dzako.”​—Irene.
“Anobatsira kuti umbokanganwa nhamo dzako.”​—Annette.
“Anoita kuti ukurumidze kufunga.”​—Christopher.
“Anoita kuti ugone kugadzirisa matambudziko.”​—Amy.
“Anoita kuti ushandise pfungwa wobva waziva zvokuita.”​—Anthony.
“Mamwe magame anoita kuti muite zvinhu pamwe chete seshamwari.”​—Thomas.
“Mamwe magame anokuitisa maekisesaizi.”​—Jael.
Unobvumirana here nezvose zvataurwa pamusoro apa? Mavideo game anogona kukubatsira kuti uve noutano hwakanaka uye uwedzere kushandisa pfungwa. Hapana chakaipa nokuatamba kunyange zvazvo mamwe acho ari okungovaraidza nguva uye ‘achibatsira kuti umbokanganwa nhamo dzako’ sokutaura kwaAnnette.
● Bhaibheri rinoti “zvose zvinoitwa pasi pematenga zvine nguva yazvo,” kusanganisira nguva yokutamba.​—Muparidzi 3:1-4.
Mavideo game ari kukudyira nguva here?
“Kana ndangotanga kutamba, zvinondiomera kurega. Ndinoramba ndichingoti, ‘rega ndimbotambazve kokupedzisira!’ Ndinozokaruka kwakutoona kuti ko inga nguva zvayafamba ndichingotamba!”​—Annette.
“Mavideo game anogona kukudyira nguva yakawanda. Unotamba kwemaawa uye wonzwa sokuti pane zvine musoro zvawaita nokuti wahwinha magame 5, nepo chaizvoizvo pasina chawaita.”​—Serena.
Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva: Kana ukarasa mari, unogona kuzowana imwe asi kana iri nguva, kana yaenda yaenda. Chazvinoreva ndechokuti nguva yakakosha kupfuura mari. Ngwarira kuti usatambisa nguva!
● Bhaibheri rinoti: ‘Shandisai uchenjeri pamashandisiro amunoita nguva yenyu.’​—VaKorose 4:5.
Mavideo game ari kukanganisa mafungiro ako here?
“Mhosva dzaizoita kuti upinzwe mujeri kana kuti utongerwe rufu dziri kuparwa mumavideo game pasina kana kufunga kaviri.”​—Seth.
“Mumagame akawanda kuti unzi wahwinha unofanira kukunda vavengi vako uye kazhinji kacho unenge uchifanira kuvauraya uchishandisa nzira dzoutsinye.”​—Annette.
“Dzimwe nguva paunenge uchitamba neshamwari dzako, unogona kutaura mashoko anotyisa okuti waisazoataura kuri kuti hamusi kutamba game. Unogona kutaura mashoko akadai sokuti ‘Uraya’ kana kuti ‘Nhasi ndiri kuda kukuuraya!’”​—Nathan.
Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva: Usatambe magame anoda kuti uite zvinovengwa naMwari zvakadai sokurwa, unzenza, uye kuita zvemidzimu.​—VaGaratiya 5:19-21; VaEfeso 5:10; 1 Johani 2:15, 16.
● Bhaibheri haringotauri kuti Jehovha anovenga munhu anorwa nevamwe asi rinoti, ‘anovenga munhu wose anofarira zvokurwa.’ (Pisarema 11:5) Kunyange zvazvo mavideo game aunotamba asingarevi kuti ndizvo zvauchazoita, anogona kuratidza kuti uri munhu akaita sei.
Funga nezveizvi: Bhuku rinonzi Getting to Calm, rinoti “mavideo game okurwa anokanganisa pfungwa dzevana kudarika zvinoitwa neTV nokuti mumavideo game acho vana ndivo vanenge vatori gamba racho. Mavideo game anokudzidzisa zvokuita sezvinongoita ticha mukirasi saka vana pavanotamba magame aya vanenge vachidzidziswa kufarira zvokurwa.”​—Enzanisa naIsaya 2:4.
Vana vakawanda vava kugona kutamba magame zviri pakati nepakati. Pane mienzaniso miviri iyi.
“Ndaisitamba magame kusvikira pakati pousiku, ndichingozviudza kuti: ‘Handiti ndinongoda kurara kwemaawa 5 chete? Rega ndimboti tambei.’ Iye zvino handichadaro. Ndava kuziva kuti hapana chakaipa nokutamba mavideo game asi chinodiwa kusanyanyisa.”​—Joseph.
“Handichanyanyi kutamba mavideo game, saka ndava nenguva yakawanda yokuita zvimwe zvinhu! Ndava kugona kubatsira vamwe kuti vanzwisise Bhaibheri uye kubatsirawo vandinonamata navo, uye ndakatodzidzawo kuridza piyano. Pane zvakawanda zvaunogona kuita panzvimbo pokutamba mavideo game!”​—David.
● Bhaibheri rinoti pazvinhu zvatinoita tinofanira kuziva pokugumira. (1 Timoti 3:2, 11) Izvi zvichaita kuti tiwane nguva yokumboita zvinovaraidza asi tichiziva pokugumira.​—VaEfeso 5:10.
Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva: Kutamba mavideo game kunonakidza kana uchiziva pokugumira. Saka usaite kuti akudyire nguva yako kana kuti kukutadzisa kuita zvinhu zvinokosha muupenyu. Hazvisi nani here kuti panzvimbo pokupedza nguva uchitamba mavideo game ushandise nguva iyoyo pakuita zvinhu zvinokosha zvichazokubatsira muupenyu?
“Kana mavideo game ako achigara maunorara, uye zvichikuomera kurega kuatamba, tsvaka kumwe kwokuaisa! Zviri nyore kutaura kuti ndicharega kutamba kana nguva dzakati dzakwana, asi kana video game yacho iri maunorara unogona kurara uchitamba usiku hwose.”​—Madison.
“Zvokutaura kuti ndichangotamba kwemanitsi 10 kana kuti 20 hazvishandi. Dzimwe nguva unotofanira kudzima game yacho wotanga kuita zvimwe zvinhu. Wadii kumborega kutamba mavideo game kwemazuva mashomanana wobva waita zvinhu zvakadai sokutamba bhora kana kuekisesaiza?​—Corbin.
“Kana uchitamba mavideo game kusvika 1:​00 dzousiku kana kudarika, zvava kureva kuti video game ndiyo yava kukuudza nguva yokurara. Zvinokanganisa utano hwako uye hazvisi izvo zvingakusweresa wakaneta mangwana acho.”​—Alexandria.
Mavideo Game Andinofarira
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvii Zvandinofanira Kuziva nezvemaVideo Game?
ijwyp nyaya 31
Mavideo Game: Ichokwadi Kuti Uri Kuhwinha Here?